२७२४ पटक पढिएको
इटहरी । कोरोना भाईरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउन र निषेधाज्ञाले कतिपय व्यापारी व्यवसायबाट विस्थापित भएका छन । लामो समय सम्म व्यापार व्यवसाय बन्द हुदा घर भाडा,कर्मचारी तलव र बैकको ब्याज तिर्न नसक्दा उनीहरु विस्थापित हुनु पर्ने अवस्थामा पुगेका छन । महङ्गो भाडा तिरेर इटहरीमा व्यापार गर्दै आएकाहरु अहिले संकटमा छन ।
सुनसरीमा अहिले पनि निषेधाज्ञा जारी छ । प्रदेश एककै व्यापारीक हब इटहरीमा स्थानीय सरकारको लकडाउन पनि छ । कोरोना संक्रमित बढ्दै जादा व्यापार व्यवसाय कसरी अगाडी बढ्ला ? बजार कहिले बाट खुल्ला होला ? यसै विषयमा उद्योग बाणिज्य संघ इटहरीका अध्यक्ष भिम पौडेललाई सञ्चारपाटीले गरेको ५ प्रश्न जस्ताको तस्तै
लकडाउनले व्यापार चौपट्ट छ । व्यापारीहरुको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?
व्यापारीहरु अहिले लकडाउनले पिल्सिएका छन । केहि व्यापारीहरु विस्थापित समेत भईसकेका छन । बैकको ब्याज र घरभाडा तिर्न समस्यामा छन । हामी बैक र घरवाला सँग छलफलकै क्रममा छौ । बैकहरु सँग समन्वय गर्दै छौ ।
बैक र घरवालाको ताकेता गरिरहेका छन र ?
ताकेता गरिरहेका छन । बैक तथा घरवालाले घरभाडा मागिरहेका छन । व्यापार व्यावसाय सञ्चालनमै नआए पछि कसरी व्यापारीहरुले किस्ता र घरभाडा तिर्लान । अहिले कर्मचारी खर्च,घरभाडा र किस्ता तिर्ने अवस्थामा व्यापारीहरु छैनन त्यस कारण यस विषयमा सरकार गम्भिर बनोस । एक पछि अर्को समस्यामा व्यापारीहरु छन । यस क्षेत्रको मुख्य समस्या भनेको कर्मचारीको तलब र बैंकको किस्ता नै प्रमुख हो ।
अबको विकल्प के हुन सक्छ ?
लकडाउनले गर्दा व्यापार व्यवसाय ठप्प हुदा घर बहालमा बसेका व्यापारीहरु विचल्लीमा परेका छन । त्यस कारण हामी अब व्यापार सञ्चालन गछौ । सरकारको मापदण्डलाई ख्याल गर्दै अब बजार खोल्नुको विकल्प छैन । सुरक्षा अपनाएर व्यवसाय खोल्न दिनु नै अहिलेको विकल्प हो । अव केहि समय बन्द रहे अधिकांस व्यापारीहरु विचल्लीमा पर्छन ।
बजार खोल्न प्रशासन बाधक छ नी ?
सुनसरी प्रशासनले भोलि अर्थात १८ गते देखि व्यापार खोल्ने छलफल चलेको थियो । फेरि खोल्न नदिने कुरा पनि आएको छ । तर अव हामी प्रशासनले भनेको मान्दैनौ । भोलि देखि इटहरी,धरान र इनरुवामा निषेधाज्ञा अवज्ञा गरेर पनि व्यावसाय सञ्चालन गछौ । हामीले बारम्बार प्रशासन सँग छलफल गरेका हौ । अब अझै बजार बन्द गर्ने सकिदैन । धरान र इनरुवाका साथीहरु सँग पनि कुरो भईरहेको छ ।
भोलि देखि बजार खुल्ला होला त ?
भोलि देखि सुरक्षा अपनाएर व्यावसाय खोल्छौ । केहि सरकारी मापदण्ड पुरा गरेर व्यापार सञ्चालन गर्नुको विकल्प रहेन । तसर्थ हामी भोलि देखि व्यावसाय खोल्छौ । अधिकत सुरक्षा अपनाएर व्यावसाय सञ्चालन गर्न सबै व्यापारीहरुलाई आग्रह गर्छु ।